Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : adala
Teny iditra adala
Fanazavàna teny malagasy enti-milaza olona very saina, simba na marary saina ka tsy mahay mihevitra ary tsy mahay misafidy; ny fibahanan-kevitra iray tsy mety miala ao an-tsaina matetika mety mahatonga adala
Fanazavàna teny anglisy foolish [Richardson 1885, Hallanger 1973]
Fanazavàna teny frantsay fou, sot [Abinal 1888, Hallanger 1974]
1 Eny, adala tokoa aho, fa ny hitaona azy handositra no tena anton-diako tamin' iny hariva iny. [Andriamalala: Ranomasina, takila 22]
2 Izaho angaha heverin' I Feno ho adala ! [Andraina: Mitaraina, takila 159]
3 izaho ity koa no adala. [Rakotonandrasana: Tantsaha, takila 24]
Teny nalaina Ohabolana misy io teny adala io
Lahatsoratra Randzavola: adala ao amin' ny Baiboly
Teny iditra adalà
Sokajin-teny filaza mandidin' ny mpamaritra adala [fitanisana]
Fanazavàna teny frantsay Sois fou: Raha tsy zaka anarina hianao, adalà any amin' izay alehanao any (Puisque tu n'écoutes pas les admonestations, porte ailleurs ta sottise) [Abinal 1888]